Apple wuxuu saxiixay Alfonso Cuarón | Wararka IPhone
Agaasimaha filimka caanka ah ee reer Mexico Alfonso Cuarón wuxuu saxiixay heshiis dhowr sano ah oo uu kula shaqeynayo Apple TV +. Cuarón waa agaasime filim Mexico ah oo u kacay jihaynta caan oo leh guul weyn waxsoosaarkii Waqooyiga Ameerika. Wuu faray "Princessyada Yar", "Harry Potter iyo Maxbuuska Azkaban", "Rome" ama "Gravity", taas oo uu kula guuleystay abaalmarinta Hollywood Oscar ee agaasimaha ugu fiican. Hadda, sida ku cad majaladda Kala duwan, agaasimaha caanka ah wuxuu la saxeexday heshiis guud oo balaaran sanado badan shirkada Apple si uu u hago waxyaabaha telefishanka loogu talo galay barnaamijka cusub ee maqalka iyo muuqaalka leh ee Apple TV +.
Qodobkaan, muddada saxda ah ee qandaraaska la sheegay lagama hadlayo, marka ma ogin inta uu heshiiska u dhexeeya Cuarón iyo Apple socon doono. Sidoo kale lama cayimin waxa uu agaasimuhu ka shaqeynayo, haddii ay jiraan taxane, filim ama dukumiintiyo. Haddii heshiisku yahay dhowr sano, waxay u badan tahay inuu ku jiri doono taxane dhowr xilli leh.
Noocyo kala duwan ayaa qoraya in heshiiska, Cuarón uu horumarin doono mashaariic telefishan oo gaar u ah Apple TV +. Waxay leedahay Gabriela Rodríguez, oo ah lamaanaha reer Mexico ee soo saaraya, ayaa socodsiin doona hawl maalmeedka shirkaddeeda wax soo saarka ee fadhigeedu yahay London, Esperanto Filmoj. Waxay sidoo kale tilmaamaysaa in qandaraasku uusan ahayn mid gaar ah, iyo in ka sokow la shaqeynta Apple, ay sii wadi doonto inay la sameyso shirkadaha kale ee wax soo saarka mashaariic kala duwan. Cuarón horeyba wuxuu khibrad ugu leeyahay telefishanka, maadaama uu ahaa soo saaraha taxanaha Mareykanka "Rumayso" ee NBC.
Tani waa war weyn oo Apple u ah, maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in mid ka mid ah agaasimayaasha ugu caansan maanta uu u abuuri doono waxyaabo gaar ah Apple TV + sanadaha soo socda. Waxaan aragnaa in shirkaddu ay si xoog leh sharad ugu gashay barnaamijkeeda maqalka, iyada oo maalgelinaysa boqolaal milyan oo doolar mashaariic waaweyn si ay ugu fidiso macaamiisha Apple TV + macaamiisha tayada leh. Laga bilaabo Nofeembar 1, waxaan awoodi doonnaa inaan aragno waxa ay na siiso barxadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple tv » Apple TV + waxay saxiixday Alfonso Cuarón
Ikinema, oo ah shirkad ku takhasustay saamaynta muuqaalka, ayaa hadda ah Apple